SAWIRRO:- Gaas Oo Daah-Furay Mashruca Balaarinta Dekedda Bosaso. – SBC
SAWIRRO:- Gaas Oo Daah-Furay Mashruca Balaarinta Dekedda Bosaso.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 28-5-2015 si rasmi ah u daahfuray mashruuca lagu balaarinayo Dekeda magaalada Boosaaso ee xarun ganacsiyeedka Puntland.
Xafladda kooban oo loogu qabtay aqalka madaxtooyada dawladda Puntland ee Boosaaso ayaa waxaa goob joog ahaa Madaxda shirkada Divers Marine Contracting L.L.C oo ah shirkada fulinaysa mashruuca balaarinta dekeda Boosaaso, wasiiro, isimo iyo masuuliyiin kale .
Madaxda shirkadda Divers Marine Contracting L.L.C ayaa madaxweynaha u soo bandhigay nashqada ay rabaan inay ka dhigaan dekeda Boosaaso, waxaana uu kula dardaarmay in barnaamijkaan si wanaagsan u hirgeliyaan.
Wasiirka dekedaha gaadiidka badda iyo ladagaalanka burcad badeeda Dawladda Puntland Cabdullaahi Jaamac Saalax iyo Abdulla Darwish oo ah madaxa shirkada Divers Marine Contracting L.L.C ayaa madaxweynaha hortiisa ku kala saxiixday hashiiska dhisida dekeda magaalada Boosaaso.
” Waxaa farxad weyn noo ah maanta uguna bishaaraynayaa dadka reer Puntland inaan halkaan isugunimi inaanu ku saxiixno hashiiska dhisida dekeda magaalada Boosaaso oo muddo aad sugayseen kana mid ah balan qaadyadii aan samaynay ” Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Madaxweyne Gaas ayaa sheegay in bilaabida iyo keenista mashruucaan uu wakhti badan ku bixiyey , balse maanta ay tahay maalin u weyn shacabka reer Puntland maadama dhawaan la bilaabi doono fulinta mashruucaan oo faa’ido weyn ugu jira dadka iyo dalkaba .
” Waxaan madaxda shirkada ku hashiinay in howsha ay si deg deg ah ku bilaabaan , waxaa dhawaan imaanaya qalabka lagu dhisayo dekeda, howshaasna si dhakhso leh ayey u bilaaban doontaa in sha’allah ” Ayuu hadalka raaciyey Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Ugaas Xassan Ugaas Yaasiin oo kamid ah isimada Puntland ayaa wax lagu farxo ku tilmaamay daah furka mashruuca lagu balaarinayo dekeda Boosaaso, isagoona madaxweynaha dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Gaas uga mahadceliyey dadaalka uu ugalay keenista mashruucaan, shacabka ayuuna ugu baaqay in dawladda ay ku taageeran.